Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Sheegay in Maalinta Axada ah uu furmayo Shirka Maamul goboleedyada | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Sheegay in Maalinta Axada ah uu furmayo Shirka Maamul goboleedyada
KISMAAYO – Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Axmed Madoobe) ayaa shaaca ka qaaday in maalinta Axada oo ku beegan taariikhda 8da Oktoobar uu Kismaayo ka furmayo shirka maamul goboleedyada.
Shirka maamul goboleedyada ayaa lagu waday in uu todobaadkan uu furmo ayaa arrimo farsamo iyo xaalado siyaasadeed uu dib ugu dhacay markii qaar kamid ah maamul goboleedyada ay shaki geliyeen.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa horay ugu baaqay shirka,wuxuuna casumay Madaxda maamul goboleedyada iney kasoo qeybgalaan si ay uga wada hadlaan xal u helida khilaafka dowlad goboleedyada qaarkood iyo Dowladda dhexe.
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Camey ayaa shirka Kismaayo ku tilmaamay mid aan maslaxad u aheyn Ummada Soomaaliyeed,wuxuu ku baaqay in shirka Kismaayo dib loo dhigo,isagoona tallo ahaan usoo jeediyey in sidii awal Muqdisho la isugu tagi jiray la isugu tago.
Sidoo kale Dowladda Federaalka ayaa tuhun badan ka qabta shirka Kismaayo,waxayna u aragtaa in maamul goboleedyada oo keligood kulma ay caqabad ku noqon karto awoodii dowladda dhexe oo jaangoynta arrimaha Siyaasada dalka.
Shirkan ayey sidoo kale dowladu u aragtaa in ka qeybgalka shirka ee Madaxweynaha Galmudug ay awood badan siinayso maadaama kacdoon siyaasadeed ku furan yahay isla markaana horay Xildhibaano ka tirsan Galmudug ay sheegeen iney xilkii ka qaadeen.
Maamul goboleedyada dalka qaarkood ayaa ka horymid go’aankii dhexdhexaadinta ahaa ee dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka ,iyagoona la saftay Isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta.